Matipi mashanu Ekuwedzera Yako YouTube Engagement - GoViral
Matipi mashanu Ekuwedzera Yako YouTube Engagement
musha » Matipi mashanu Ekuwedzera Yako YouTube Engagement
Zvemukati mevhidhiyo painternet zvave chishandiso chakakosha chebhizinesi pamwe nekudyidzana kwevanhu. Mavhidhiyo ndiwo akanyanya kugovaniswa mhando yehukama zvemukati kuridza echinyakare mablog, zvakapetwa zvinyorwa, uye infographics mazuva ese. Ndokusaka iwe uchifanira kudzidza maitiro ekuita neanogona vateereri kuburikidza nekugovana uye neruzivo zvemukati. Verenga pamusoro kuti udzidze mashoma matipi ayo anowedzera yako YouTube kubatanidzwa ichikubvumidza iwe kukwezva akasiyana maonero, chengetedza vanoiona, uye gadzira zvinotungamira.
1. Kurukura nevateereri
Paunenge uchigadzira vhidhiyo yako, zvakakosha kuti urangarire kuti urikutaura nevanhu chaivo. Iwe unofanirwa kubata online kubatanidzwa senge hurukuro yaungave uine muhupenyu chaihwo. Kunyangwe vateereri vako vasiri kusangana newe, iwe unofanirwa kutaura navo sekunge variko. Heano matipi mashoma ekukubatsira iwe kuita zvakafanana:
Ita zviri nyore, zvakajeka, uye zvinowoneka mapoinzi
Simbisa matipi kana matanho akakosha
Dzokorora nekudzokorora pfungwa huru
Kana zvichibvira, ipa kuseka
2. Tumira mavhidhiyo nguva dzose
Nzira yakanakisa yekusimbisa uye kuchengetedza kubatanidzwa ndeyekuenderana uye nekuvimbika sosi yeruzivo. Iwe unofanirwa kuseta yekuona iyo inoramba ichidzoka kune zvimwe. Iwe unofanirwa kutumira nguva dzose uye chengeta ako mavhidhiyo azvino, matsva, uye akakosha. Izvo zvakakosha kuti iwe unzwisise kuti kune zviuru zvevamwe maYeTubers senge iwe urikuteedzera yako yepamoyo vateereri. Iri ibasa rako kugadzira mbiri yeruzivo uye kwete kuodza moyo vateereri vako.
3. Nzwisisa vaoni vako
Ino inguva ye'kukurumidza-chikafu ruzivo 'zvinoreva kuti vanhu vanoda zvemukati pavanenge vachizvida. Kana vakadzvanya pavhidhiyo yako uye vakasawana zvavaitarisira, zvingave zvisina kunaka kuchiteshi chako. Paunenge iwe wagadzira hukama nevateereri vako, unofanirwa kuenderera uchivapa izvo zvaunoda. Kana iwe uine chiteshi chevaraidzo, iwe unofanirwa kuenderera uchivaraidza. Kana iwe uri ruzivo chiteshi, iwe unofanirwa kuenderera uchipa ruzivo. Rangarira kuti vanhu vari kuona vhidhiyo yacho nechikonzero. Iwe unofanirwa kuwana icho chikonzero uye chiwedzere icho.
4. Kurudzira kuda, zvikamu, uye makomendi
Kuti ubudirire uye uwedzere kuita kwako, iwe unoda kuyedza kubva kune kwako pamwe nerutivi rwemuoni wako. Zera reinternet uye pasocial media mapuratifomu rakaratidza kuti munhu wese ane maonero. Uye iwe unofanirwa kukurudzira vanhu kuti vataure maonero avo kuburikidza nezvavanoda, makomendi, uye zvikamu. Hazvinyadzise kukumbira vateereri vako kuti vafarire kana kupindura pavhidhiyo. Muchokwadi, izvi zvinoita kuti vataridzi vako vazive kuti unokoshesa maonero avo uye vari kuda kuvandudza zvemukati zvemukati. Izvo zvakare zvichawedzera kutarisa kwako. Asi, chakakosha ndechekuti iwe unofanirwa kubvunza.
5. Wedzera kufona kune chiito
Kuva nemumwe munhu anoona vhidhiyo yako hakufanirwe kuve kwako chete kunetseka. Paunenge uchinge wawana vateereri, iwe unofanirwa kutora mukana nazvo uye wedzera 'kufona kuti uite' mushure meimwe yega vhidhiyo yako. Zvinogona kunge uchivabvunza kuti vanyore kuchiteshi chako kana kukutevera pasocial media chikuva. Iwe unogona zvakare kupa NAP kune yako sevhisi kana bhizinesi kana chinongedzo kune yako webhusaiti. Iwe unofanirwa kufunga nezvevateereri vako semukana unofanirwa kuteverwa.
YouTube ndiyo yechipiri yekutsvaga injini pasi rese. Kana ikashandiswa ipapo ipapo, inogona kubatsira kuvaka yako mhando munzira isingagone kuitwa neimwe chikuva. Nemazano akareruka ataurwa pamusoro apa, unogona kunatsiridza kubatanidzwa kwako paYouTube uye kuve nekutarisa kwenguva refu kunoguma nekuwedzera bhizinesi.
Kana iwe uchida rumwe rubatsiro neYouTube kubatanidzwa, GoViral ndiyo nzira yekuenda. Uchishandisa yavo yemhando yepamusoro sevhisi, iwe unogona kuwana yemahara YouTube anodikanwa, maonero, makomenti, uye vanyoreri pachiteshi chako. Nenzira iyi, iwe unogona kutarisa kune ako mavhidhiyo pasina kunetseka nezve kubatanidzwa.
Matipi mashanu Ekuwedzera Yako YouTube Engagement neGoViral Chikwata Chekunyora, 23 August 2021
TikTok yakashandura iyo vhidhiyo yezvigadzirwa indasitiri kubva payakatangwa muna 2018. Iyo algorithm yeapps yakabvumidza vagadziri vezvinhu papuratifomu kukwikwidza mamirioni emaonero zvisinei nekutevera kwavo, kureva kunyange musiki…